सुशान्तको मृत्यु पछि पुर्वप्रेमिका अंकिताले दिइन सुशान्तको परिवारलाइ दह्रो साथ, बुवाले अंकिताको बारेमा भावुक हुँदै यसो भने ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/सुशान्तको मृत्यु पछि पुर्वप्रेमिका अंकिताले दिइन सुशान्तको परिवारलाइ दह्रो साथ, बुवाले अंकिताको बारेमा भावुक हुँदै यसो भने !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भएको १५ दिन भइसकेको छ । उनको निधनको ११ दिन पछि पोष्टमार्टम रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । तर आफ्नो एक मात्र छोरा गुमाएका सुशान्तका वुवाको आँखा भने अझै ओभाएको छैन । उनी अहिले पनि आफ्ना छोराको स्मरणमा टोलाउँदै बसेका छन् । उनले छोरालाई लिएर भविष्यका योजना बनाएका थिए । केही महिना पछि सुशान्तको विवाहको कुरा पनि चलेको थियो ।
सुशान्तसंग विवाहका बारेमा आफुले कुरा गरेको उनले बताएका छन् । तर उनले सुशान्तको प्रमिका भनिएकी रियालाई भने नचिनेको बताएका छन् । उनले निकै आश्चर्यजनक कुरा भनेक छन् । उनले सुशान्तको साथीका रुपमा अंकितालाई मात्र चिनेको बताएका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले रियालाई सुशान्तको प्रेमीका भनेर दावी गरिरहँदा सुशान्तका बुवाले भने आफुले सुशान्तको साथीको रुपमा अंकितालाई मात्र चिनेको बताएका छन् । शोकमा रहेका उनका वुवाले अंकिताले सुशान्तको निधन पछि पनि दिएको साथको प्रशंसा गरेका छन् ।
अंकिताले सुशान्त जिवित छँदा पनि उसको साथ कहिल्यै छोडिनन् सुशान्तको निधन पछि पनि अंकिता हाम्रो साथमा छन्, उनले भनेका छन्, म सुशान्तको साथीका रुपमा अंकितालाई मात्र चिन्छु । केही मिडियाले रियाको नाम पनि लिएका छन् तर म उनलाई चिन्दिन ।
उनले अंकितासंग आफ्नो बेलाबेलामा कुराकानी पनि हुने गरेको बताएका छन् । तर रियासंग भने आफ्नो कहिल्यै कुरा पनि नभएको बताए । मनमा सानो कुरा पनि नलुकाएर आफुलाई सबैकुरा ब्यक्त गर्ने छोराले आफ्नो जिवन नै त्याग्ने निर्णय गरे भन्ने कुरा उनलाई अहिले पनि विश्वास लागेको छैन ।
उनले भने, सानो हुदाँ मनमा केहि कुरा राख्न सक्दैनथ्यो । सबै कुरा दिदीलाई र मलाई सुनाउँनै पर्थ्यो । अंकिताले सुशान्तको निधन पछि पनि दिएको साथको प्रशंसा गर्दै उनले भनेका छन्, अंकिता हामीलाई सान्तवना दिन मुम्बई मात्र हैन सुशान्तलाई अन्तिम पटक बिदाई गर्न पटना पनि आएकी थिइन् । उनले आफुले पनि अंकितालाई निकै माया गर्ने गरेको बताएका छन् ।
रुपाले गर्भ बोकिन ? कृष्ण ओली दंग ! रुपाले लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस
नायिका केकी अधिकारीको आज जन्मदिन : कति वर्ष पुगिन त केकी ? जान्नुहोस उनको बारेमा . .
रमेश प्रसाई र नन्दाको नयाँ टिकटक भिडियो बहिनिले हाल्ने बितिक्कै भिडियो भाईरल, लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुहोस्)
कति सम्पति छाडेर ‘अस्ताए’ सुशान्त, चन्द्रमामा पनि छ उनको जग्गा ?
अहिले सम्मकै हसाउने भिडियो एक छिन थकान मारेर हेर्नुहोस् अनि पेट मिचिमिची हास्नुहोस